Roa lahy voasambotra: taribin’ny Jirama mahatratra 1,750 km very | NewsMada
Mirongatra ny halatra taribin’ny Jirama eto Toamasina. Nahatratra 1,750 km ny very tato anatin’ny iray volana monja. Mangataka fiaraha-miasa amin’ny vahoaka sy ny mpanjifa ny tompon’andraikitra.
Notsorin’ny tompon’andraikitry ny Jirama sy ny kaomandàn’ny borigadin’ny zandary, ny alarobia teo, fa ankoatra ny solika tsy ampy, mazava izao fa tena fototry ny fahatapahan-jiro eto Toamasina ny halatra tariby mitondra herinaratra. Vokatry ny fiaraha-miasan’ny roa tonta, voasambotra ny jiolahy roa lahy tamin’ireo valo, nangalatra tariby mitondra herinaratra matanjaka (haute tension), 3 000 Volts avy any Ivolobe mankany Toamasina.
Nihanahery vaika ny halatra tariby tamin’ny tambajotra iny, nanomboka ny 24 novambra 2018 teo, efa nahatratra 800 metatra. Nanohy izany ireo mpanao ratsy ka nametraka paikady ny Jirama sy ny zanday, ary tratra ny 10 janoary teo ireo roa lahy ireo, i Zafilahy François (20 taona) sy i Fabrice (22 taona) izay nahatrarana tariby mirefy 950 metatra. Tafatsoaka ny enin-dahy namany ary mbola karohina, ankehitriny.
Raha fintinina, nirefy 1,75 km ny taribin’ny Jirama nisy nangalatra tato anatin’ny iray volana monja. Nohamafisin’ny tompon’andraikitry ny Jirama fa tena fototry ny jiro tapaka eto Toamasina ity halatra tariby avy any Ivolobe ity fa fanampiny ihany ny tsy fahampian’ny solika, manodina ny milina mamokatra herinaratra.
Ao anatin’ny fiarahamonina
Samy nanamafy ireo tompon’andraikitra roa ireo fa efa miezaka araka izay tratrany ny Jirama ka tsy tokony hisy ny hatezeran’ny vahoaka aminy. Nomarihin’izy ireo fa mamatsy ny herinaratra eto Toamasina ny avy any Ivolobe satria azo avy amin’ny tohodrano, rehefa tsy ampy ny solika mampandeha ny milina amin’ny gropy termika. Noho izany, olana eny amin’ny fiarahamonina ny halatra tariby fa tsy miankina mivantana amin’ny Jirama intsony.
Araka ny fanazavan’ny solontenan’ny Jirama, i Chadli sy i Koto Roger, “tokony samy hanara-maso ireo mpangalatra fitaovam-panjakana ilain’ny vahoaka isika tsirairay raha tiana ny tsy hisian’ny fatapahan-jiro. Volabe no very amin’ny taribin-jiro, sady fatiantoka ho an’ny mpanjifa koa ny herinaratra tapaka satria tsy afaka mamokatra sy mihary”.
Nanamafy izany ny GPCE, tompon’andraikitry ny zandary, i Heurtir Félix, fa “tokony hilaza sy hanome vaovao ny zandary na ny mpitandro filaminana ny mponina sy ny mpanjifa raha mahita toe-javatra hafahafa, toy ny olona mitahiry fitaovan’ny Jirama, na mpangalatra, na mpividy satria olona any anatin’ny fiarahamonina ihany izy ireny.